Lix xaqiiqo oo laga diiwaan geliyey kulankii xalay Kooxda Liverpool ay guuldarrada kala kulantay Southampton – Gool FM
Lix xaqiiqo oo laga diiwaan geliyey kulankii xalay Kooxda Liverpool ay guuldarrada kala kulantay Southampton
(Southampton) 05 Jan 2021. Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa guuldarro xanuun badan iyo waji gabax kala soo laabtay garoonka Southampton oo ay booqatay kulan qeyb ka ah horyaalka Premier League.
Gool daqiiqadihii hore uu ka dhaliyey Danny Ings ayaa looga soo adkaaday kooxda Liverpool kulankii ay booqatay garoonka St Mary.
Haddaba halkaan hoose ka eeg lix xaqiiqo oo laga diiwaan geliyey kulankan:-
>- Liverpool ayaa ku guuldarreysatay inay gool dhaliso kulamo isku xiga horyaalka Premier League markii ugu horreysay tan iyo bishii May ee sanadkii 2018-kii, waxaana ay shabaqa soo taabanayeen mid kasta oo ka mid ah 21-kii kulan ee markaas ka hor ay ciyaareen horyaalka.
>- Liverpool ayaa shuudkii ugu horreeyey ee bartilmaameed toos ah kulankan la timid daqiiqaddii 75-aad waxaana u sameeyey Sadio Mané – waa sugitaankii ugu dheeraa ee Reds ay sugto inay sameyso laad bartilmaameed toos ah kulan Premier League ah tan iyo bishii December ee sanadkii 2015, markaasoo ay shuudkii ugu horreeyey ee bartilmeed ah la yimaadeen daqiiqaddii 89-aad kulan ka horjeedeen Newcastle United.
>- Kaddib markii ay siddeed shuut ku bartilmaameedsadeen guushii 7-0 ee ay ka gaareen Crystal Palace, Kooxda Liverpool ayaa soo uruursatay kaliya 7 isku day oo bartilmaameed ah saddexdii kulan ee ugu dambeeyay oo ay ciyaartay horyaalka Premier League.
>- Danny Ings goolkii furitaanka ee uu u dhaliyey Southampton waxa uu ahaa goolkiisii 50-aad ee horyaalka Premier League, waxaana uu yimid 01:51 (hal daqiiqo iyo 51 ilbiriqsi bilowgii ciyaarta), waana goolkii ugu dhaqsiyaha badnaa ee uu ka dhaliyo tartankan ciyaaryahan Ings.
>- Ciyaaryahanka Southampton ee James Ward-Prowse ayaa afar gool caawin ka sameeyey horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan, kaliya fasal ciyaareedkii 2014-15 oo uu sameeyey lix caawin ayaa ka badan marka la eego caawinta uu horyaalka ka sameeyey xilli ciyaareedkiiba.
>- Goolhayaha Southampton ee Fraser Forster ayaa shabaqiisa gool ka ilaashaday markii ugu horreysay horyaalka Premier League tan iyo bishii October ee sanadkii 2017-kii kulan ay 1-0 uga adkaadeen West Bromwich Albion, waxaana markaas kaddib uu ciyaaray tartankan 13 kulan.
Southampton oo garoonkeeda St. Mary's guul kaga gaartay kooxda Liverpool… +SAWIRRO